Deb xoogan oo Muqdisho ku qabsaday gari bal ku rarnaa(Sawirro) - Somalia Focus
14,March,2017(SofoNews) Kadib markii laga war heley in gaari weyn oo bal ku rarnaa uu ku qubtay wadada 30 ka gaar ahaan ag agaarka kuliyaddii hore ee jaala Siyaad waxaa durba bilowday gurmad deg deg ah lala gaaro gaarigasi iyo dadkii saarnaa.
Gubashada gaarigani oo nuciisu ahaa kuwa xamuulka qaada aya timid markii sida goob joogayaal ay ku waramayaan uu ka qarxay lugaha dambe islamarkaana dem ka dhashey darawalka oo digsiga ku waday uu sabaabay in uu gubto gaarigaasi waxaana demieyey dadweyne iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah.
Gaariga ku gubtay Isgooska Kuliyada Jaalle Siyaad ayaa sabab u noqday in daqiiqado uu laamiga xayirma ayna adkaato in gaadiidka halkasi maraan, waxaana gaariga gubtay uu wali yaalaa halkii uu ku gubtay.
Dadkii u rarna balkaasi ayaa soo wajahday walwal maadaam xili abaar ah lagu guda jiro waxaana uu u muuqday in uu ahaa mid loo waday ganacsi ahaan si ay u iibsadaan dadka xoolaha dhaqanaya.
Dadweyne aad u farabadan oo ka warheley dhacdadan ayaa goobtaasi ku soo xoomay waxaaan weli gaari uu yahay mid fadhiya halkii uu ku gubtay maadaama uu matoorka iyo waxyaabo kale oo muhiim ahaa uu demba saameeyey.